Wool Felt, Pendant chendant Christmas, Synthetic Felt - Huasheng
Hebei Huasheng Felt Co., Ltd. waxaa loo aasaasay shirkad ganacsi oo heer sare ah oo dhar-dumis ah, dhar aan xirnayn 1970, waxayna ku taalaa Nangong & Shijiazhuang, China.
Waxaan nahay laf dhabarta warshadaha dharka dusha ka sameysan ee Shiinaha, iyo soo-saareha loogu talagalay soo-saareyaasha soo saara Shiinaha ee Railway Harmony Locomotive EMU (CRH3-380).
XAALADAHA UGU HOOSE EE MADAXWEYNAHA
Magaca badeecada Polyester Qalabka Qalabka 100% Cabirka polyester 0.5mm-70mm Miisaanka 40gsm-7000gsm Dhererka ugu badan ilaa 3.3m dherer 50m / kitaab duudduuban, 100m / midab ama midab loo habeeyay midab ahaan sida Farsamooyinka Kaarka Pantone ee Farsamo-yaqaan aan cirro lahayn oo la ruxay Shahaadada CE, REACH , ISO9001, AZO Polyester fiber (oo loo soo gaabiyo loo yaqaan 'PET fiber') waa fiber isku-dhafan oo ay heshay polyester lafdhabarta oo ay sameysay polycondensation of organic dibasic acid iyo aalkolada cabba. Fiber polyester waa ma ...
Nooca T112 112 122 132 Cufnaanta (g / cm3) 0.10-0.50 0.10-0.43 0.30-0.42 0.25-0.35 Khafiifinta (mm) 0.5-70 2-40 2-40 2-50 Heer jilicsan Austrian Merino Wool Midab Wool Shiine ah Midab cad Caddaan / Midabka cawlan / madow ama Pantone Width 1m dherer 1m-10m Farsamooyinka Qoyan Woo cadaatay Shahaadada ISO9001 & SGS & ROHS & CE, iwm 1.Firm. Xargaha fiber-ka ayaa si adag loogu xirxiraa mana furfuri doono. 2. Caabudid caabudid. Timaha dhogorta la riixay ayaa dareemaya qaab-dhismeed xoog leh oo ah nabaad-gu ...
Kubadaha qallalan ee dharka dhogorta waxaa had iyo jeer laga sameeyaa 100% dhogorta New Zealand. Ma furfuri doonaan oo sannado ayey socon doonaan. Cabirkoodu waa ku habboon yahay wax ku-oolnimada ugu badan. Waxay aad ugu fiican yihiin daadinta waxyaabaha baalalleyda sida dushooda iyo jaakadaha. Isticmaalida kubbadaha qalajista dhogorta waxay ka badbaadisaa maqaarkaaga kiimikooyinka loo isticmaalay go'yaha qalajiyaha iyo qalabka jilicsan ee dharka lagu dhaqo, waxayna sidoo kale ka badbaadisaa qalajiyaha haraaga ka haray kuwan. Waa bedel dhaqaale oo lagu ridayo kiimikooyinka lagu ridayo xaashiyaha qalajiyaha iyo kuwa dharka lagu nadiifiyo. Aad ...
Suudh dhalaalaya (kiiska muraayadaha indhaha)
Marka muraayadaha indhaha la dareemo, waxaad si badbaado leh u gelin kartaa muraayadahaaga kaydinta oo aad nadiif ka dhigi kartaa. Boorsada muraayadaha muraayadaha indhaha ah ayaa loo adeegsadaa Slip naqshad furan, si fudud ayaad u gelin kartaa oo aad uga soo bixi kartaa muraayadahaaga. Boorsadan muraayadaha muraayadaha indhaha ah kaliya maahan inay qaadaan muraayadaha indhaha, laakiin sidoo kale furayaasha, kaararka, bushimaha iyo waxyaabo kale oo yar. Adigoo adeegsanaya dusha sare ee dareemka, sanduuqa muraayadaha muraayadaha indhaha waa mid jilicsan oo raaxo leh in la taabto, waa joodar yar oo dharka lagu dhejiyo. Boorsada muraayadaha indhaha ah waxay ku habboon tahay muraayadaha indhaha ee caadiga ah, muraayadaha indhaha ee amniga, guluubka ka hortagga glare ...
Guddiyada Acoustic panels waxaa laga sameeyay 100% PET, iyadoo la adeegsanayo cirbado lagu riixayo. Habka waxsoosaarku gebi ahaanba waa muuqaal ahaan & deegaanka, waa biyo wasakhaysan, wasakhaysan, wasakh, wax la taaban karo ah. Qol. Qalabkayaga PET acoustic panics-ka sunta ah, aan xasaasiyad lahayn, aan xanaaq lahayn oo aan lahayn xirmooyin rasmi ah oo loo yaqaan 'NRC': 0.85.100% polyester a ...
Shayga Mawjadaha isku-dhalaalaya & caruusadda Waxyaabaha 100% merino dhogor Cufnaanta 3-5mm Xajmiga 4 × 4 '', ama midabbo gaar ah oo midab leh oo midabbo leh Wareegga Wareega, hexagon, labajibbaarka, iwm. Xulashada daabacaadda Silkscreen daabacaadda daabacaadda kuleylka dijitaalka ah. Xulashada Logo-baarista Laser Scarning, silkscreen, sumad dhogor leh, maqaar maqaar saar ah, iwm. 100% dhogorta dhogorta la dareemay ayaa waliba ah dabiici dabiici ah, oo la cusboonaysiin karo taas oo macnaheedu yahay inay ka madaxbanaan tahay walxaha sunta ah. Waxaa & ...